Umlando omfushane kaNoriega Varela | Izincwadi Zamanje
U-Antonio Noriega Vareal wazalwa ngo-1869 edolobheni laseGalician lase UMondonedo futhi wafunda esikoleni sokufundela ubufundisi. Yize abhekane nempilo yakhe ebheke ebizweni lezenkolo, uNoriega wagcina esenguthisha, umsebenzi owamholela ekuhlaleni ezindaweni ezahlukahlukene ngaphakathi kwelakubo iGalicia.
UNoriega ubambe iqhaza elibonakalayo ku umzabalazo wezolimo eqamba izinkondlo eziningana ngakho futhi ebhala evuna imbangela emaphephandabeni, okwake kwamlethela imiphumela eqondile emkhakheni womuntu siqu nowobungcweti.
Ubungani bakhe naye umlobi Isi-Galician Otero Pedrayo Kuholele ekutheni afunde ngezincwadi zesiPutukezi, ezaba nomthelela omkhulu nomthombo wokumkhuthaza ngaleso sikhathi sempilo yakhe.
Umsebenzi wakhe owaziwa kakhulu "Yenza ermo", lapho ezincwadini zayo zokuqala yayinesihloko sezintaba futhi lapho singathola khona izinkondlo ezivela ezinhlotsheni ezimbili ezihlukene njenge-costumbrismo, egxile empilweni yasemzaneni kanye nabasebenzi bayo bezolimo kanye nezinkondlo ngemvelo, lapho kukhombisa khona amagama amaningi.
Ekugcineni, u-Antonio Noriega Varela washona ngo-1947 ngo UViveiro, indawo lapho achitha khona isigaba sokugcina sempilo yakhe.
Isithombe - Almoneda Vigo
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » UNoriega Varela biography
'Namuhla kwenzeke into enkulu kakhulu kimi' nguDaniel Estorach Martín